ကျောက်မျက်ရတနာစျေးနှုန်းကိုဘယ်လိုခန့်မှန်းရမလဲ။ အသစ် update ကို 2021. ဂရိတ်အကြံပေးချက်များ
စိန်များ မှလွဲ၍ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျောက်တုံးကျောက်တုံးများ၏ခိုင်မာသောအရင်းအမြစ်မရှိပါ။ တချို့နိုင်ငံတွေကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေချမှတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ သို့သော်ဤစည်းမျဉ်းများသည်ဤတိုင်းပြည်တစ်ခုစီ၌သာတရားဝင်သည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုတွင်အုပ်ချုပ်မှုမရှိ။
ကျောက်တုံးစျေးသည်ရောင်းသူနှင့် ၀ ယ်သူတစ် ဦး အကြားသဘောတူညီချက်၏ရလဒ်သာဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျောက်မျက်များ၏တန်ဖိုးကိုခန့်မှန်းရန်အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်။
ပထမဦးစွာသင့်သောကျောက်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရပါမယ်, အမည်ရ, ကျောက်ကို၏မိသားစုကဘာလဲ? ပိတ်သောကျောက်၏အမျိုးမျိုးကဘာလဲ? ဒါကြောင့်သဘာဝအသို့မဟုတ်ဒြပ်ရှိသလော
ကကျောက်ကိုသဘာဝအကြောင်းထွက်လှည့်လျှင်, လာမယ့်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: ကကုသသို့မဟုတ်မဟုတ်လော
ဒီပထမ parameters တွေကို ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုကျောက်၏အရည်အသွေးခန့်မှန်းရန်စတင်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာပုံမှန်အားသင် gemological ဓါတ်ခွဲခန်းကထုတ်ပေးအားလုံးလက်မှတ်များပေါ်မှာရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အချက်အလက်များ၏ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအသင်တစ်ဦးအတွေ့အကြုံရ gemologist မဟုတ်လျှင်နှငျ့သငျ gemology ဓာတ်ခွဲခန်း tools များရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်သင်ကိုယ်သင်အားဖြင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်မပေးနိုငျကွောငျးသတငျးအခကျြဖြစ်ကြ၏။
စျေးကွက်အပေါ်ကျောက်ကိုစျေးနှုန်းသင်နှင့်ကုန်သွယ်မှုစျေးကွက်ပေါ်မှာသင့်အနေအထားအရသိရသည်ပထဝီအနေအထားအရတည်ရှိသည်ဘယ်မှာပေါ် မူတည်. : သင်ကျောက်ကိုဖော်ထုတ်သည့်အခါတဦးတည်းအချက်ကိုဖေါ်ထုတ်ရန်ရှိနေတုန်းပဲ။
နောက်ဆုံးတွင်ကျောက်မျက်ရတနာများကိုသင်လက်ကားရောင်းဝယ်မှုနှင့်ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းစျေးကွက်တွင် ၀ ယ်သည်မပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားသွားလိမ့်မည်။ ကျောက်တုံးကိုကျောက်မျက်ပေါ်တွင်တပ်ထားခြင်းရှိ၊ မရှိပေါ် မူတည်၍ စျေးနှုန်းမှာကွဲပြားလိမ့်မည်။
အမြန်ပြင်ဆင်ချက်မရှိ အကယ်၍ သင်သည်ကျောက်တုံး၏စျေးနှုန်းကိုခန့်မှန်းလိုပါကသင်ရောက်ရှိနေသည့်နေရာ၌ကျောက်မျက်ရတနာပေးသွင်းသူများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းဖြင့်စျေးကွက်လေ့လာမှုပြုရန်လိုသည်။ သို့မှသာသူတို့၏စျေးနှုန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်အကြမ်းအားဖြင့်အကြံဥာဏ်ရလိမ့်မည်။ ဒီပထဝီဒေသတွင်သက်ဆိုင်သောကျောက်မျက်ရတနာများ၏စျေးနှုန်း, ဤတိကျသောအချိန်၌။